Garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb oo dib loo furay iyo ciidamadii ku sugnaa oo laga qaaday – Radio Daljir
Luulyo 28, 2019 8:42 b 0
Xaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareec ayaa degan saaka,kadib markii shalay garoonka ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata Ahlusuna Waljameeca oo uu madax uyahay macalin Maxamuud.
Ciidamadii ku sugnaa garoona ayaa saaka laga qaaday halkaasi waxaana dib loogu celiyay xeryihii ay ka yimaadeen shalay.
Dhaq dhaqaaqii garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur ayaa si caadi ah ku soo laabtay saaka, waxaan si habsami leh usocota shaqadii garoonka gaar haan duulimaadyadii Muqdisho iyo Dhusamareeb.
Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo madaxda Ahlusuna waxaa xalay iaa iyo saaka usocday wadahadalo la xiriira sidii loo soo afjari laha khilaafka ka dhashay ciidamada ay dowladda Soomaaliya ka soo dajisay garoonka Dhuusamareeb.
Kheyre ayaa ka baaqday shalay safar uu ugun ambabixi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Heshiis hoose oo Ra’iisul Wasaaraha iyo Hoggaanka Ahlusuna horay u gaareen ayaa waxaa ka mid ahaa in amniga magaalada la wareegto dowladda Federaalka, ciidanka Ahlusuna la qarameeyo, lana xareeyo, tababarna loo furo, inkastoo lagu guuleystay diiwaan gelinta ciidamada.
Majirto ilaa iyo haatan cid ka hadashay xaalada ka taagay Dhuusamareebn,lamana oga waxa ka soo bixi doona shirkan usocda madaxda dowladda iyo culimada Ahlusuna.
Daljir kala soco warkan iyo wixii ku soo kordha.
Xasan Heykal, Daljir Qardho.
Xaalada Ceerigaabo iyo wararkii ugu dambeeyay